Waxaa qoray Paul H. Dworkin, MD, oo laga soo xigtay Help Me Grow National Blog
Waxaa mudnaan u leh inaan fursad u helo inaan kala hadlo daawadayaasha dalka oo dhan wax ku saabsan faafinta qaabka Help Me Grow iyo doorkeeda dhismaha nidaamka dhammaystiran ee carruurnimada hore. Ka-qaybgal kasta oo hadal ahi waxa uu soo bandhigayaa fursad gaar ah oo lagula macaamilayo dhegaystayaal kala duwan, ansixiyo ama ka doodid fikradaheenna muhiimka ah, oo aan ballaadhinno aqoonteena. Runtii, doorka muhiimka ah ee Xaruntayada Qaran ee Help Me Grow waa in la fududeeyo wadaaga dhaqamada ugu wanaagsan iyo casharada laga bartay bahdeena. Dhawaanahan, waxaan sharaf u lahaa inaan ka dhiibto ciwaanka muhiimka ah ee Ururka 5 ee ugu horeeya Help Me Grow Shirwaynaha Gobolka oo dhan ee Fresno, California.
Waxaan uga mahadcelinayaa in 5-ta Urur ee ugu horreeya ay fidiyeen martiqaadka, maadaama aan abaal ugu hayno California iyo First 5 heerka hadda ee Help Me Grow. Waxaan had iyo jeer maanka ku hayaa in ballaarinta Help Me Grow ee ka baxsan Connecticut ay ka bilaabatay California oo leh Help Me Grow Orange County. Guusha halkaa ka dhacday waxa ay nagu dhiirigelisay in aanu sii wadno taageerada dawladaha kale ee danaynaya hirgelinta qaabka. Maanta, waxa aan hoos u dhigay ilaa heerka uu qaabka laftiisu u koray si uu qayb weyn uga noqdo dadaallada dhismaha nidaamka carruurnimada hore ee in ka badan 30 gobol.
Kaliforniya waxay xaqiiqsatay guulo badan oo ku saabsan qaab dhismeedka Help Me Grow, oo ay ku jiraan nidaamyo badan oo Help Me Grow ah oo ku shaqeeya ururada laf dhabarta ee heer degmo kuwaas oo hoos yimaada hal urur oo gobolka oo dhan ah, First 5. Horumarka Help Me Grow ee California wuxuu ina baray faa'iidooyinka isticmaalka habka isku xidhka nidaamka badan. oo leh ururka laf dhabarta gobolka oo dhan oo beddel u ah hal nidaam oo gobolka oo dhan ah, sida asal ahaan loogu nashqadeeyey Connecticut. Waxyaabo kale oo kala duwan oo muhiim ah oo laga helay waayo-aragnimada Kalifoorniya waxaa ka mid ah adeegsiga ilo-maaliyeed gaar ah si loo joogteeyo dadaallada Help Me Grow (tusaale, Doollarka canshuurta tubaakada California), adeegsiga baaritaanka korriinka sidii kabaal si loo horumariyo hab isku dhafan oo lagu ogaanayo goor hore, tixraac iyo isku xirka, iyo Muhiimadda ay leedahay ku-xidhka Help Me Grow gudaha qorshaha guud ee dhismaha nidaamka carruurnimada hore.
U diyaargarowga hadalkayga, Heather Little, Agaasimaha Nidaamyada ee Ururka 5 ee ugu horreeya California, ayaa la wadaagay talada Karen Pautz, 5aad ee Agaasimaha Fulinta ee Degmada Siskiyou in aan dib u eego qodobbadayda hadalka ee 10th Annual Help Me Grow Forum ee gu'gii hore ee Buffalo. Si xamaasad leh ayaan u aqbalay codsigan.
Fresno, sidii hore ee Buffalo, waxaan ku soo bandhigay waxa aan dareemayo 10-ka astaamood ee ugu sarreeya ee nidaamka carruurnimada hore ee dhammaystiran oo aad u shaqaynaya. Waxaan soo jeediyay nidaamkan oo kale:
Waxay hubisaa in bixiyayaasha si joogto ah u soo bandhigaan mudnaanta, ra'yiga, iyo welwelka waalidka iyada oo loo marayo wadahadal furan oo waalidku hoggaamiyo taas oo qayb ka ah ilaalinta iyo baadhista korriinka waxtarka leh;
Waxay u sahlaysa bixiyayaasha inay si wax ku ool ah oo kalsooni leh uga qayb qaataan horumarinta korriinka, ogaanshaha hore, iyo, marka la tilmaamo, u gudbinta iyo xidhiidhka barnaamijyada iyo adeegyada bulshada ku salaysan;
Waxay xoojisaa horumarinta korriinka iyada oo la dhexgelinayo caafimaadka ilmaha iyo qaybaha kale ee adeegga carruurta sida moodooyinka waxtarka leh sida Tallaabooyinka Caafimaadka leh, Barnaamijka Iskaashiga Sharciga iyo Caafimaadka, Mashruuca DULCE, Gaadhi oo Akhri, Mashruuca Is-dhexgalka Fiidiyowga, daryeelka wanaagsan ee kooxda (tusaale, Barashada Waalidnimada), iyo apps iyo aaladaha kale ee dhijitaalka ah (tusaale, Sparkler iyo Vroom);
Waxay xoojisaa awoodda isuduwidda daryeelka gudaha waaxda adeegyada caafimaadka carruurta, iyo dhammaan qaybaha, iyadoo kordhinaysa helitaanka nidaamyada Help Me Grow si loo hubiyo in qoysasku si fudud u awoodaan inay helaan adeegyada iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay u koraan;
Waxay kordhisaa halbeegyada waxqabadka dhaqanka oo ay ku jiraan u diyaarsanaanta dugsiga, heerarka akhriska fasalka saddexaad, heerka qalin-jabinta dugsiga sare, caafimaadka jidhka (tusaale, tusmada cufka jidhka oo caafimaad qaba), iyo sidoo kale cabbirrada rajada iyo farxadda;
Waxay ku dhiirigelisaa shirkadaha caymiska inay u soo celiyaan bixiyeyaasha isticmaalka xeeladaha caddaynta ku salaysan si ay u xoojiyaan arrimaha ilaalinta, sida adkeysiga qoysaska, isku xirka bulshada, helitaanka taageero la taaban karo marka loo baahdo, iyo awoodda kor loogu qaado horumarinta shucuur-bulsheed ee caruurtooda;
Waxay horumarisaa moodooyinka lacag-bixinta, iyo sidoo kale isku-dhafka maamulka iyo ilaha maaliyadeed ee qaybaha oo dhan, kuwaas oo taageera barnaamijyada iyo adeegyada carruurnimada iyagoo kalsooni ku qaba in mustaqbalka kaydinta caafimaadka dabeecadda, waxbarashada gaarka ah, iyo nidaamka caddaaladda carruurta in ka badan caddaynta maalgashiga adeegyada caafimaadka carruurta;
Waxay dhiirri-gelisaa is-dhexgal xooggan oo ka dhexeeya adeegyada caafimaadka carruurta iyo dhammaan qaybaha kale ee muhiimka ah, ee taageerada qoyska si loo fududeeyo isku xirka qoyska iyo helitaanka. Waaxyaha noocan oo kale ah waxaa ka mid ah daryeelka hore & waxbarashada, taageerada qoyska, gaadiidka, caafimaadka xaafadda iyo badbaadada, guriyeynta, horumarinta xoogga shaqada, iyo cuntada iyo nafaqada;
Waxay kordhisaa fahamka in adeegyada ubadka iyo qoysku ay yihiin walxo muhiim ah oo ku jira qaab dhamaystiran, isku dubaridan, hab beeleed oo diirada lagu saarayo ka hortagga carruurta iyo qoysaska khatarta yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyo sidoo kale bixinta adeegyo degdeg ah kuwa horeba u gaaray heer sare. heerka khatarta; iyo
Waxay kordhisaa dadka loogu talagalay barnaamijyada iyo adeegyada carruurta leh daahitaannada, baadhista iyo cilladaha ilaa dhammaan carruurta, gaar ahaan kuwa halista ugu jira korriinka iyo natiijooyinka dabeecadda liidata oo ay ugu wacan tahay arrimo bulsho iyo deegaan oo xun.
Waxaan qiray in gaaritaanka sifaadkan oo dhan ay u muuqan karaan kuwo aan macquul ahayn oo laga adkaan karo; si kastaba ha ahaatee, shay kastaa waa qayb ka mid ah Help Me Grow khibradiisa iyo awoodiisa. Intaa waxaa dheer, dhisidda nidaam dhammaystiran waxay ku jirtaa meel la gaari karo awood kasta oo Help Me Grow ah.
Sida Madasha Sannadlaha ah, waxaan xusay inaan horay u qabannay in ka badan intii aan weligay ku fikiray inay suurtagal tahay sannadihii ugu horreeyay ee Help Me Grow. Runtii, heerkayaga hadda ee nidaamyada 99 Help Me Grow iyo 31 dawladood ee xidhiidhka la leh waddanka oo dhan, oo leh 23 nidaamyada gobolka California, ayaa mudan in laga fikiro oo dabbaaldegyo. Si kastaba ha ahaatee, hadda waa in aan samaynaa aragtideena xitaa sare oo aan wax badan ka fikirno marka aan wadaagno aragtideena guud ee 2020 iyo wixii ka dambeeya oo aan ku dadaalno in aan wax ka barano hababka ugu wanaagsan ee nidaamka carruurnimada hore.
Booqasho Help Me Grow National Blog si aad wax badan uga akhrido Dr. Dworkin's blog, iyo shantiisa fure ee "ka qaad" mudnaanta.